Manokatra rindrina horonantsary 6 metatra ao amin'ny Interactive Multimedia Center | ny fizahantany Espaniola Roma Vaovao momba ny dia any Italia
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Italia » Manokatra rindrina horonantsary 6 metatra ao amin'ny Interactive Multimedia Center ny Espaniôla fizahan-tany any Roma
Enga anie 7, 2021
Roma birao fizahan-tany Roma
Notokanan'ny birao fizahan-tany Espaniôla Roma ny ivon-toerana Interactive Multimedia Center (IMC) vaovao any Piazza di Spagna, fo mitempo an'i Roma, hanolotra ny paikady nomerika an'ny fizahantany Espaniôla. Ny vanim-potoana 2021-2022 dia natokana ho an'ny Camino de Santiago - ny dia an-tongotra Santiago.
Ny paikady nomerika any Espana dia ho azon'ny mpandraharaha fizahan-tany italianina raha vantany vao tapitra ny fe-potoana fameperana vokatry ny COVID-19.
Malalaka ny matihanina amin'ity sehatra ity amin'ny famelabelarany sy ny fidirany amina efitrano fandraisam-bahiny raha angatahina.
Mampiditra rindrina horonantsary mirefy 6 metatra ny habaka ahafahan'ny mpampiasa mivezivezy ao anatin'ny toerana Espaniola.
Ny Board dia naneho ny IMC tamin'ny metatra toradroa 100 miaraka amin'ny vahaolana teknolojika farany indrindra hahitana ny vaovao momba ny toerana Espaniola amin'ny alàlan'ny haitao sy ny loharanom-pahalalana multimedia. Ny IMC dia noforonina ho toerana vaovao hanaovana fampisehoana, atrikasa ary fivoriana.
Jorge Rubio Navarro, talen'ny Biraon'ny fizahantany espaniola any Roma, nampahafantarina: “Tianay hataon'ny mpandraharaha fizahan-tany italianina ny paikadin'i Espaniola raha vantany vao tapitra ny fe-potoana fameperana ateraky ny COVID-19. Ny IMC dia ho azon'ny matihanina amin'ity sehatra ity, afaka manao ny fampisehoana ataon'izy ireo ary ho efitrano fandraisam-bahiny arak'asa.
Ivana Jelinic, filohan'ny Fiavet Confcommercio (Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi E Turismo - Federasiona italianina an'ny fikambananan'ny fizahan-tany sy fizahan-tany) dia nanatrika ny asan'ny fampiharana nomerika ary nankasitraka ny tombony omen'ny IMC ho toerana fihaonana vaovao amin'ny varotra sy ho any Espana any amin'ny toerana haleha.